သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာ ဇော်မဲလုံးပြောနေတဲ့ လေထဲကအစိုးရ လိုင်းပေါ်က အစိုးရလို့လှောင်ခဲ့သူတွေ. လေထဲမှအထိုးခံရသည့် အခါ – Shwe Yoe
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာ ဇော်မဲလုံးပြောနေတဲ့ လေထဲကအစိုးရ လိုင်းပေါ်က အစိုးရလို့လှောင်ခဲ့သူတွေ. လေထဲမှအထိုးခံရသည့် အခါ
ဖက်ဆစ် မအလဟာ 𝐍𝐔𝐆 အစိုးရကို “လေထဲကအစိုးရ, လိုင်းပေါ်ကအစိုးရ”လို့ လှောင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မအလဟာ လိုင်းပေါ်ကအစိုးရလုပ်တာကို နောက်ကလိုက်လုပ်နေရပါတယ်။
သူ့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးတောင် 𝐍𝐔𝐆 က ခြေဥဖျက်ပြီး ထွင်လုပ်တာကို လိုက်တုလုပ်နေရတာပါ။
တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးသတင်းမှာ နေပြည်တော်၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူးနဲ့ မွန်ကို သူတို့အပိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အစိမ်းရောင်နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး၊
ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးက ၅၀-၅၀ လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ စစ်ကိုင်း၊ မကွေး၊ ချင်း၊ ကယားနဲ့ တနင်္သာရီက ရန်သူအားကောင်းနယ်မြေလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ရခိုင်၊ ကချင်၊ ရှမ်းမြောက်နဲ့ ကရင်က ရန်သူ့နယ်မြေဖြစ်ပြီး စစ်ဖြစ်ရင် ဆုတ်ခွါရနိုင်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေးလုပ်လိုရင် သာလွန်အင်အား သုံးရမှာဖြစ်လို့ လက်ရှိမှာ တပြိုင်နက်ထဲတိုက်ရန် ထိုးစစ်ဆင်ရန် မဖြစ်နိုင်လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။
ရှမ်းတောင်နဲ့ အခြားဒေသတွေဟာ ရန်သူအချင်းချင်းတိုက်နေလို့ သူတို့ကိုဒုက္ခမပေးနိုင်လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။ အဆိုပါ ရခိုင်၊ ကချင်၊ ရှမ်းမြောက်နဲ့ ကရင်ကသာ လက်နက်ကြီးရလို့ ယခုအချိန်ထတိုက်ရင် မအလရှုံးပါမယ်။
𝐍𝐔𝐆 က ထီစရောင်းချိန်မှာ မအလရဲ့ ကျပ်မပြည့်တဲ့အဖွဲ့ထင်ထားတာက ပြည်ပမှာပဲရောင်းမယ်လို့သာ ထင်ထားခဲ့တာပါ။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ချဲဒိုင်လိုသာလုပ်မယ်လို့ ထင်ခဲ့ပုံပါ။
စာရေးသူတို့တောင် ဝင်ငွေကို ထီကနေရှာရမှန်း မသိခဲ့ပါ။ စီးပွါးရေးသမားတွေထံက အခွန်ကောက်တာလောက်သာ တွေးခဲ့တာပါ။
ဒီနေရာမှာလဲ 𝐍𝐔𝐆 က မထင်မှတ်တဲ့နေရာကနေ ထပြီးထီရောင်း၊ ပြည်တွင်းက ငွေပေးစနစ်ကို ကွန်ပျူတာကတဆင့်သုံးပြီး ရောင်းသွားသလို၊ ပြည်သူကလဲ ဝက်ဝက်ကွဲအားပေးလိုက်လို့ မအလမြွေဖမ်းသွားပါတယ်။ ပြည်ထဲရေးနဲ့ ဘဏ္ဍာအခွန်တစ်ညလုံး အစည်းအဝေးထိုင်ပြီး
ဘဏ်တွေပိတ်ဖို့အထိ စဉ်းစားလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ပိတ်ရင်၊ လိုင်းပေါ်က ငွေသုံးလို့မရရင် သူ့ဘဏ်စနစ်ပြိုကွဲမှာမို့လို့ မအလဟာ 𝐍𝐔𝐆 ရဲ့ ခွချက်လုပ်တာကို ခံလိုက်ရပါတယ်။
ဘဏ်ငွေပေးစနစ်ပိတ်ရင်လဲ သူ့စီးပွါးထိခိုက်မယ်၊ မပိတ်ရင်လဲ 𝐍𝐔𝐆 ထီရောင်းတာကို တားမရဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အနေအထား အကျပ်အတည်းထဲ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ 𝐍𝐔𝐆 ဟာ လုပ်ငန်းအတော်များများကို လိုင်းပေါ်က အောင်မြင်စွာလုပ်လာနေပါတယ်။
မအလဟာ ယခင်ကလိုမဟုတ်ဘဲ 𝐍𝐔𝐆 ကို နောက်ကနေ လိုက်တုန့်ပြန်နေရပါတယ်။ တပ်ထဲမှာလဲ PDF တပ်အတွက် ကင်းစောင့် ကျင်းတူး၊ မိုင်းမြုပ်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတာ လချီနေပြီး၊ ဆရာဇော်ဝေစိုး ပြောလိုက် ရေးလိုက်တိုင်း တပ်လှန့်နေရလို့ နောက်ပိုင်း တကယ်လာတိုက်ရင်တောင် တပ်ကအသင့်အနေအထားရှိဖို့ ခက်လာမှာပါ။
စာရေးသူမြင်တာကတော့ ယခုအချိန်ထိ 𝐍𝐔𝐆 ရဲ့ PDF တပ်က မလာသေး ဘဲတောင် မအလဟာ လေထဲက အတိုက်ခံ အထိုးခံနေရတာနဲ့တင် အတော်နာနေပါပြီ။
တကယ်သာ လက်နက်ကောင်းကောင်းနဲ့ PDF က တိုက်နိုင်ရင် ရန်ကုန်ဟာ အချိန်မရွေး ဒီမိုလက်ထဲ ရောက်မှာပါလို့ ပြောပါရစေ။
ဖက္ဆစ် မအလဟာ 𝐍𝐔𝐆 အစိုးရကို “လေထဲကအစိုးရ, လိုင်းပေါ်ကအစိုးရ”လို့ လွောင်လေ့ရွိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မအလဟာ လိုင်းပေါ်ကအစိုးရလုပ္တာကို နောက္ကလိုက္လုပ်နေရပါတယ်။
သူ့ရဲ့ဝန်ကြီးခ်ုပ်ရာထူးတောင် 𝐍𝐔𝐆 ကျေခဥဖ်က်ပြီး ထြင္လုပ္တာကို လိုက္တုလုပ်နေရတာပါ။
တပ်ရဲ့လျုံခုံရေးသတင်းမွာ နျေပည်တော်၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူးနဲ့ မြန္ကို သူတို့အပိုင္ထိန်းခ်ုပ္ထားတဲ့ အစိမ်းရောင္နယ်ျေမအျဖစ် သတ္မွတ္ထားပြီး၊
ရန္ကုန္နဲ့ မန္တလေးက ၅၀-၅၀ လို့ သတ္မွတ္ထားပါတယ်။ စစ္ကိုင်း၊ မေကြး၊ ခ်င်း၊ ကယားနဲ့ တနင်္သာရီက ရန်သူအားကောင်းနယ်ျေမလို့ သတ္မွတ္ထားပါတယ်။
ရခိုင်၊ ကခ်င်၊ ရွမ်ျးေမာက္နဲ့ ကရင္က ရန်သူ့နယ်ျေမျဖစ်ပြီး စစ်ျဖစ်ရင် ဆုတ္ခြါရနိုင္တယ္လို့ သတ္မွတ္ထားပါတယ်။ စစ္ဆင်ရေးလုပ္လိုရင် သာလြန်အင်အား သုံးရမျွာဖစ္လို့ လက်ရွိမွာ တပြိုင္နက္ထဲတိုက်ရန် ထိုးစစ္ဆင်ရန် မျဖစ်နိုင္လို့ သုံးသပ္ထားပါတယ်။
ရွမ်းတောင္နဲ့ အျခားဒေသေတြဟာ ရန်သူအခ်င်းခ်င်းတိုက်နေလို့ သူတို့ကိုဒုက္ခမေပးနိုင္လို့ သုံးသပ္ထားပါတယ်။ အဆိုပါ ရခိုင်၊ ကခ်င်၊ ရွမ်ျးေမာက္နဲ့ ကရင္ကသာ လက္နက်ကြီးရလို့ ယခုအခ်ိန္ထတိုက်ရင် မအလရှုံးပါမယ်။
𝐍𝐔𝐆 က ထီစေရာင်းခ်ိန္မွာ မအလရဲ့ က်ပ္မျပည့်တဲ့အဖြဲ့ထင္ထားတာကျပည္ပမွာပဲရောင်းမယ္လို့သာ ထင္ထားခဲ့တာပါ။ျပည္တြင်းမွာတော့ ခ်ဲဒိုင္လိုသာလုပ္မယ္လို့ ထင္ခဲ့ပုံပါ။
စာရေးသူတို့တောင် ဝင်ငြေကို ထီကေနရွာရမွန်း မသိခဲ့ပါ။ စီးပြါးရေးသမားတြေထံက အခြန်ကောက္တာလောက်သာ တြေးခဲ့တာပါ။
ဒီနေရာမွာလဲ 𝐍𝐔𝐆 က မထင္မွတ္တဲ့နေရာကေန ထပြီးထီရောင်း၊ျပည္တြင်းက ငြေပးစနစ္ကို ကြန္ပ်ူတာကတဆင့်သုံးပြီး ရောင်းသြားသလို၊ျပည်သူကလဲ ဝက်ဝက္ကြဲအားပေးလိုက္လို့ မအလေမြဖမ်းသြားပါတယ်။ျပည္ထဲရေးနဲ့ ဘဏ္ဍာအခြန္တစ်ညလုံး အစည်းအေဝးထိုင်ပြီး
ဘဏ်တြေပိတ္ဖို့အထိ စဉ်းစားလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ပိတ်ရင်၊ လိုင်းပေါ်က ငြေသုံးလို့မရရင် သူ့ဘဏ္စနစ်ပြိုကြဲမွာမို့လို့ မအလဟာ 𝐍𝐔𝐆 ရဲ့ ခြခ်က္လုပ္တာကို ခံလိုက်ရပါတယ်။
ဘဏ်ငြေပးစနစ္ပိတ်ရင္လဲ သူ့စီးပြါးထိခိုက္မယ်၊ မပိတ်ရင္လဲ 𝐍𝐔𝐆 ထီရောင်းတာကို တားမရျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ အေနအထား အက်ပ်အတည်းထဲ ရောက်သြားခဲ့ပါတယ်။ 𝐍𝐔𝐆 ဟာ လုပ်ငန်းအေတ္မာ်ားမ်ားကို လိုင်းပေါ်က အောင်ျမင္စြာလုပ္လာနေပါတယ်။
မအလဟာ ယခင္ကလိုမဟုတ္ဘဲ 𝐍𝐔𝐆 ကို နောက္ကေန လိုက္တုန့်ျပန်နေရပါတယ်။ တပ္ထဲမွာလဲ PDF တပ်အတြက် ကင်းစောင့် က်င်းတူး၊ မိုင်ျးမုပ္နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတာ လခ်ီနေပြီး၊ ဆရာဇော်ဝေစိုးျေပာလိုက် ရေးလိုက္တိုင်း တပ္လွန့်နေရလို့ နောက္ပိုင်း တကယ္လာတိုက်ရင်တောင် တပ္ကအသင့်အေနအထားရွိဖို့ ခက္လာမွာပါ။
စာရေးသျူမင္တာကေတာ့ ယခုအခ်ိန္ထိ 𝐍𝐔𝐆 ရဲ့ PDF တပ္က မလာသေး ဘဲတောင် မအလဟာ လေထဲက အတိုက္ခံ အထိုးခံနေရတာနဲ့တင် အေတ္နာာနေပါပြီ။
တကယ်သာ လက္နက်ကောင်းကောင်းနဲ့ PDF က တိုက်နိုင်ရင် ရန္ကုန်ဟာ အခ်ိန္မေရြး ဒီမိုလက္ထဲ ရောက္မွာပါလို့ျေပာပါရေစ။
နေ့စဉ် မိုးလေ ဝ သသတင်း
လေအား၊ ဒီရေအားတို့ မှ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားကြရန် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအာင်လှိုင်က ပြောကြား
၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ အသစ်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေ၊ ငွေဒဏ်နဲ့ ထောင်ဒဏ်များ
စီးပွားရေး တည်ငြိမ်ဖို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေဖြင့် ဈေးမမြှင့်ကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ ဗဟိုဘဏ်ဒုဥက္ကဌ